ကလေးသူငယ်တွေ ယုံကြည်မှုရှိစွာကြီးပြင်းစေချင်ရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ထက်မြက်တဲ့ကလေးနဲ့ သာမာန်ကလေး ဘယ်လိုကွဲပြားသွားတာလဲ? ဘဝအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ သင်ယူရတာလဲ? (၁)နှစ်ကနေ (၃)နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာ ဘာကြောင့် နည်းမှန်လမ်းမှန် ဆုံးမပြောဆိုပြီ နားလည်မှုပေးသင့်သလဲ? ဘဝတသက်တာ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်တတ်သူ ၊ အကောင်းမြင်တတ်သူဖြစ်ဖို့ ဘယ်အရွယ်ကစလေ့ကျင့်ရမလဲ? ကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုဟာ မှားယွင်းနေပြီလို့ လူကြီးမိဘတွေက ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ အပြည့်အဝ ဖွံ့ဖြိုးလာတာလဲ? ကလေးငယ်တွေရဲ့ အရည်အသွေး ထွန်းပြောင်လာမှုတွေဟာ ဘယ်တွေနဲ့ဆိုင်သလဲ? လူ့ဘဝတသက်တာမှာ သင်ယူမှုမြင့်မားဆုံးအချိန်ဟာ တစ်နှစ်အောက်အရွယ်ဆိုတာ မှန်သလား? တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို မေတ္တာနဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေ မပေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ? တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို မေတ္တာနဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေ ပေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာအားသာလဲ? ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? မထုံတက်တေးဖြစ်သွားတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ? သုံးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို ဆိုဆုံးမတာ မှားသွားခဲ့လို့ ပြန်ချင်ရင် ရမလား? ကလေးသူငယ်တွေကို အကောင်းမြင်စိတ်ရှိအောင် ဘာကြောင့်သင်ကြားပေးသင့်သလဲ? အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲ? အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲ? လွယ်လွယ်နဲ့ စိတ်ဓါတ်မကျတတ်တဲ့သူအဖြစ် ကြီးပြင်းလာစေဖို့ ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲ? ပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးဘဝဆိုတာဘာလဲ ၊ ဘယ်လိုပေးရမလဲ? သုံးနှစ်အောက် သင်ယူမှုနဲ့ သုံးနှစ်အထက်သင်ယူမှု ဘာကွာခြားသလဲ? အဆိုးမြင်သူတွေရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုက ဘာလဲ? ယုံကြည်မှုမဲ့နေသူတွေဟာ ဘာကြောင့် အဆိုးမြင်တတ်သူတွေ ဖြစ်နေရသလဲ? နဂိုစိတ်ရင်းမှာကိုက ဘာကြောင့်အဆိုးမြင်နေသလဲ? အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေရဲ့ မှားယွင်းတဲ့တွေးခေါ်မှုဟာ ဘာလဲ? မိဘတွေရဲ့ ကလေးအပေါ် နေ့တဓူဝ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေက ကလေးကို ဘာသင်ပေးလိုက်သလဲ? ကလေးတုန်းက အလုပ်ခံရတဲ့ နှစ်သက်မှု ၊ မနှစ်သက်မှုတွေကို လူကြီးတွေက ဘာကြောင့် ပြန်လုပ်နေကြသလဲ? ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းအပြောမခံရတဲ့ကလေး ဘာသင်ယူသွားသလဲ? နဂိုမူရင်းစိတ်ထားနဲ့ လုပ်ရပ် ဘာကြောင့်ကွဲလာသလဲ? ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေကို အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ ကြီးပြင်းလာသူတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ? ကလေးသူငယ်တွေဟာ ဘယ်အချိန်မှာ သိမ်ငယ်စိတ် ဝင်လာတတ်သလဲ? ကလေးတွေ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ကလေးသူငယ်တွေ တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာတွေဟာ ဘာတွေလဲ? ကလေးသူငယ်တွေဟာ လက်သာတဲ့ဆီ လိုက်တဲ့အတျင့် ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲ? ကျောင်းကောင်းမှာ ပညာသင်ကြားရတဲ့ တချို့ကလေးငယ်တွေ ဘာကြောင့် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်ရသလဲ? ကလေးဟာ ကျောင်းနေမပျော်တာ ၊ ကျောင်းပညာရေးမှာ စိတ်မပါတော့တာတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ? ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုက ကလေးငယ်တွေ ဘာကြောင့် သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ဖြစ်ရသလဲ? အခြားအကြောင်းကြောင့် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်တတ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ ရှိသလား? သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်ရာကနေ စိတ်ရောဂါ ဖြစ်သွားနိုင်သလား? ကလေးသူငယ်တွေဟာ ဘယ်အခြေအနေမှာ အထီးကျန် ခံစားလာရသလဲ?
ကလေးသူငယ်များ၏စိတ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ CHAT Room မှာ ဝိုင်းဆွေးနွေးမယ်။
ပြီးရင် ကလေးသူငယ်များ၏စိတ် နဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးဖို့ ဒီပေ့ခ်ျကို ပြန်လာရပါမယ်။